Lambarkee Ayuu Ronaldo U Xiran Doonaa Man Utd? – Ma Cavani Ayaa Looga Saarayaa Lambarka 7-aad Mise Wuxuu Xiran Doonaa Lambarka Taariikhiga Ah? – Garsoore Sports
Lambarkee Ayuu Ronaldo…
Cristiano Ronaldo wuxuu caan ku yahay lambarka toddobaad, laakiin Edinson Cavani ayaa hadda maaliyaddaas ka xirta Man Utd, lambarkee ayuu xiran doonaa? Miyaa looga saarayaa Cavani mise nambar cusub ayuu qaadanayaa?
Cristiano Ronaldo ayaa hadda kusoo laabtay gurigiisii hore ee Old Trafford, isagoo si rasmi ah ugu soo wareegay Manchester United
Weeraryahanka ayaa ku wargeliyay tababaraha Juventus Max Allegri rabitaankiisa ah inuu ka tago Serie A si uu u helo fursado meelo kale ah.
Manchester City ayaa u muuqatay inay ugu cadcaddahay saxiixiisa, laakiin Man Utd ayaa haatan ku guuleysatay tartanka kaddib markii ay City burburisay xiisihii ay u qabtay.
Ronaldo ayaa caan ku ah xiriirka uu la leeyahay lambarka toddobaad, laakiin maaliyaddee ayuu u xiran doonaa Manchester United ayaa la is weeydiinayaa? Inaguna waxaan idiin soo gudbineynaa nambarada suurtagalka ah inuu xirto in, fursadaha la heli karo iyo sidoo kale taariikhda lambarka kooxda Ronaldo iyo haddii ay tahay in Cavani looga saaro nambarkaas amaba la siiyo marka uu kooxda ka tago.
Wali lama xaqiijin lambarka uu Ronaldo u xiran doono Man United.
Ronaldo wuxuu muddo dheer lamaano la ahaa lambarka toddobaad oo uu xiranaa inta ugu badan waayihiisa cayaareed, wuxuuna xitaa ku dhisay summaddiisa oo dhan naaneesta ‘CR7’
Haatan, lambarka toddobaad ee Manchester United oo uu Ronaldo horay u xirtay muddadii uu ugu horreysay ee uu ku sugnaa Old Trafford waxaa xiran Edinson Cavani.
Arrintaasi waa ay xalismi doontaa haddii Cavani oo maanta oo talaado ah aad loola xiriirinayo kooxda Barcelona uu ka tago kooxda.
Ronaldo uma badna inuu ku farxi doono inuu xirto lambar aan ahayn toddoba, lambar ay sidoo kale xirteen halyeeyadii kooxda United sida David Beckham, George Best, Denis Law, Eric Cantona iyo Bryan Robson.
Laakiin hadda, lambarkaas ayaa ah mid uusan heli karin kabtanka Portugal.
Lambarka sagaalaad ee Red Devils waxaa xiran (Anthony Martial), waana sidoo kale nambar uu Ronaldo sidoo kale horay u xirtay.
NAMBARADEE U BANAAN?
In kasta oo Ronaldo uu xirfadiisa oo dhan ku dhisay lambarka uu jecel yahay ee toddobaad, haddana had iyo jeer ma ahayn lambarka uu jeclaa.
Waxa uu xirtay lambarka 28-aad intii uu u safanayay kooxdiisii hore ee Sporting Lisbon, waana lambarkii ugu horreey ee uu doorbiday markii uu u saxiixay Man Utd sannadkii 2004.
OFFICIAL: CRISTIANO RONALDO HAS RETURNED TO MAN UTD 🔴 pic.twitter.com/Z7dM3UMDie
Wuxuu ahaa tababare Sir Alex Ferguson qofkii ku qanciyay Ronaldo inuu qaato maaliyadda lambarka 7-aad ee astaanta u ah, sababtuna waxay tahay kalsoonida uu ku qabay in weeraryahanku uu gaari karo meel sare oo cajiib ah sida kuwii isaga kaga horreeyay ee xirnaa maaliyadda.
Runtii, waa cusub ayuu ka bilaabay Old Trafford markii Ronaldo uu qaatay maaliyadda lambarka toddobaad, inta kalena waa taariikh.
Ronaldo ayaa markii hore ku qasbanaaday inuu xirto lambarka sagaalaad markii uu u wareegay Real Madrid sannadkii 2009-kii, ilaa uu lambarka toddobaad banneeyay halyeeyga kooxda Raul, kaasoo kooxda kaga biiray Schalke sannadkii 2010.